လိင်မှုဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများကိုအွန်လိုင်းမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြခြင်း - ကွန်ယက်ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း (2019) - Your Brain On Porn
ကွန်ယက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (2019): အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများ
zhou, Yanyan, Bryant ပေါလုသည်ဗင်းဆင့်ငြိုးနှင့် Jingyuan Yu ။
အရည်အသွေး & အရေအတွက် (2019): 1-19 ။
အခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများညစ်ညမ်းကြည့်ရှုညစ်ညမ်းပစ္စည်းများလောင်ဖို့အတှကျအဓိကလမ်းဖြစ်လာကြပါပြီ။ အများစုမှာယခင်အကြောင်းအရာသရုပ်ခွဲလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများအတွက်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းအပြုအမူတွေအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ နည်းပါးလာလေ့လာမှုများကြောင့်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းများကိုကြည့်ရှုတစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုပြသပေမယ့်လည်းတွဲဖက်ဖြစ်ပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုတစ်စီးရီးဆံ့ထားတဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Scripts, မပေးသာလျစ်လျူရှု, တစ်ဦးချင်းစီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု၏ပျံ့နှံ့မှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြပါပြီ။ ကွန်ယက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနည်းကိုအသုံးပြုခြင်း, လက်ရှိလေ့လာမှုအခမဲ့အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏ကြီးမားသောအရေအတွက် co-ဖြစ်ပျက်မှုပုံစံများဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုလူကြိုက်များအွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်မူလတန်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုထုတ်ဖော်ပြသခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော script ၏အလားအလာအပေါ်သက်ရောက်မှုများခန့်မှန်းထားသည်။
Alexa web ပေါ်မှာထိပ် 500 က်ဘ်ဆိုက်များ .: ။ (2019) Alexa က်ဘ်ဆိုက်: https://www.alexa.com/topsites။ Access 27 မတ်လ 2019
အန်သိုနီ, S ကို .: porn ဆိုဒ်များရုံကိုဘယ်လိုကြီးမားတဲ့ရှိပါသလဲ ExtremeTech ရဲ့။ ကနေ (2012) ရယူရန်မတ်လ 27, 2019 http://www.extremetech.com/computing/123929-just-how-big-are-porn-sites
Bauserman, R ကို .: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များနှင့်ညစ်ညမ်း: ဆက်စပ်မှုသုတေသနသုံးသပ်ချက်။ အခြေခံပညာ Apple က။ Soc ။ Psychol ။ 18(4), 405-427 (1996) ။ https://doi.org/10.1207/s15324834basp1804_4 CrossRefGoogle Scholar
Borgatti, SP, Everett, MG: core ကို / အစွန်အဖျားအဆောက်အဦများ၏ & Models ။ Soc ။ Netw ။ 21(4), 375-395 (2000) ။ https://doi.org/10.1016/s0378-8733(99)00019-2 CrossRefGoogle Scholar
တံတားများ, AJ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Sun က, C တို့, Liberman, R ကို .: ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်အင်တိုက်အားတိုက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို။ အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 16(10), 1065-1085 (2010) ။ https://doi.org/10.1177/1077801210382866 CrossRefGoogle Scholar
Brosius, HB, Weaver III ကို, JB, Staab, JF: ခေတ်ပြိုင်ညစ်ညမ်း၏လူမှုရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ "အဖြစ်မှန်" Exploring ။ ဂျေလိင် Res ။ 30(2), 161-170 (1993) ။ https://doi.org/10.1080/00224499309551697 CrossRefGoogle Scholar
ဘရောင်း, JD, L'Engle, KL: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာမှ aith အမေရိကန် Eerly မြီးကောင်ပေါက် '' ထိတွေ့ဆက်စပ် X-rated လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူ။ Community ။ res ။ 36(1), 129-151 (2009) ။ https://doi.org/10.1177/0093650208326465 CrossRefGoogle Scholar
ညစ်ညမ်း၏ Bryant, ဂျေ, ဘရောင်း, D ကို .: အသုံးပြုခြင်း။ Bryant, ZJ (ed ။ ) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: ခုနှစ်တွင်သုတေသနတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှနှင့်မူဝါဒကိုစဉ်းစား, စစ 25-55 ။ ။ လောရင့် Erlbaum, Hillsdale (1989)Google Scholar
Collins, Am, Loftus, EF: semantic အပြောင်းအလဲနဲ့၏တစ်ဦးကဖြန့်-activation သီအိုရီ။ Psychol ။ ဗျာ 82(6), 407 (1975)CrossRefGoogle Scholar
Cooper က, တစ်ဦးက .: လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing ။ ဆိုက်ဘာ Psychol ။ ပြုမူနေ။ 1(2), 187-193 (1998) ။ https://doi.org/10.1037/e705222011-004 CrossRefGoogle Scholar
Demare, ဃ, ဆူးပင်, ဂျေ, နှုတ်ခမ်း, HM: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအစီရင်ခံတင်ပြအကြမ်းဖက်ညစ်ညမ်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်။ ဂျေ Res ။ Pers ။ 22(2), 140-153 (1988) ။ https://doi.org/10.1016/0092-6566(88)90011-6 CrossRefGoogle Scholar
Doran K ကို .: စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအရွယ်အစား, အတိုင်းအတာများနှင့်လူမှုရေးကုန်ကျစရိတ်။ ခုနှစ်တွင်: Eberstadt, အမ်, Layden, MA (eds ။ ) ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများ၏လူမှုကုန်ကျစရိတ်: တွေ့ရှိချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များ၏ထုတ်ပြန်ချက်။ Witherspoon Institute မှ, Priceton (2010)Google Scholar
Frith, အိပ်ချ်, Kitzinger, C ကို .: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီ Reformulating: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတစ် discursive စိတ်ပညာဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ သီအိုရီ Psychol ။ 11(2), 209-232 (2001) ။ https://doi.org/10.1177/0959354301112004 CrossRefGoogle Scholar
Garcia က, LT: ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများနှင့်အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသဘောထားမှ Exposure: တစ်ဆက်စပ်မှုလေ့လာမှု။ ဂျေလိင် Res ။ 21, 378-385 (1986) ။ https://doi.org/10.1080/00224498609551316 CrossRefGoogle Scholar
Gorman, အက်စ်, ရဟန်းတော်-Turner, အီး, ငါး, ဖြစ်မှု: အခမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသူကအင်တာနက်ကို web sites များ: ဘယ်လိုပျံ့နှံ့နေတဲ့လုပ်ရပ်များလျော့နည်းသွားစေကြသလော Gend ။ ကိစ္စများ 27(3–4), 131–145 (2010). https://doi.org/10.1007/s12147-010-9095-7 CrossRefGoogle Scholar
Hald, GM က: ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 35(5), 577-585 (2006) ။ https://doi.org/10.1007/s10508-006-9064-0 CrossRefGoogle Scholar
တိုးချဲ့ link ကိုတူနှင့် EQ အကဲဖြတ်ကွဲပြားခြင်းနှင့်အတူ Huang က, အယ်လ်, ဝမ်, G. အ, ဝမ်, Y. , Blanzieri, အီး, စု, C ကို .: Link ကို Cluster ။ PLoS ONE 8(6), e66005 (2013) ။ https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066005 CrossRefGoogle Scholar
Huesmann, LR: ကျူးကျော်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့မော်ဒယ်။ Aggressive ။ ပြုမူနေ။ 14(1), 13-24 (1988) ။ https://doi.org/10.1002/1098-2337(1988)14:1%3c13:aid-ab2480140104%3e3.0.co;2-j CrossRefGoogle Scholar
Huesmann, LR, Miller က LS: ငယ်စဉ်ကလေးဘဝမီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုမှထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Aggressive ။ ပြုမူနေ။ 1, 153-186 (1994) ။ https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_7 CrossRefGoogle Scholar
Klaassen, MJ, ပေတရု, J ကို .: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွက်တန်းတူရေး (၌) ကျား: လူကြိုက်များညစ်ညမ်းအင်တာနက်ကဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ဦးအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေလိင် Res ။ 52(7), 721-735 (2015) ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2014.976781 CrossRefGoogle Scholar
Krippendorff K ကို .: အကြောင်းအရာအားသုံးသပ်ခြင်း: ၎င်း၏နည်းလမ်းမှတစ်ဦးနိဒါန်း။ sage Publiations, Los Angeles မြို့ (2013)Google Scholar
lo, VH, ဝေ, R ကို .: တတိယလူတစ်ဦးကြိုးသကျရော, ကျား, မ, နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာညစ်ညမ်း။ ဂျေအသံလွှင့်။ အီလက်ထရွန်။ မီဒီယာ 46, 13-33 (2002) ။ https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4601_2 CrossRefGoogle Scholar
lo, VH, ဝေ, R ကို .: အင်တာနက်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက် '' လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေမှ Exposure နှင့်အပြုအမူ။ ဂျေအသံလွှင့်။ အီလက်ထရွန်။ မီဒီယာ 49(2), 221-237 (2005) ။ https://doi.org/10.1207/s15506878jobem4902_5 CrossRefGoogle Scholar
Malik, C တို့, Wojdynski, BW: Boys ဝင်ငွေ, မိန်းကလေးများမဝယ်: အမေရိကန်သားသမီးရဲ့ branded-ဖျော်ဖြေရေးကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာရုပ်ဝါဒ၏ပုံဖော်ရိုက်ကူးမှု။ ဂျေကလေး။ မီဒီယာ 8(4), 404-422 (2014) ။ https://doi.org/10.1080/17482798.2013.852986 CrossRefGoogle Scholar
Mckee, တစ်ဦးက .: သြစတြေးလျပင်မညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများတှငျအမြိုးသမီးမြား၏ objectification ။ ဂျေလိင် Res ။ 42(4), 277-290 (2005) ။ https://doi.org/10.1080/00224490509552283 CrossRefGoogle Scholar
Mooallem, ဂျေတစ်ဦးကစည်းကမ်းစီးပွားရေး, New York Times ကို (2007) .: ။ ရယူရန်မတ်လ 27, 2019 ထံမှ http://www.nytimes.com/2007/04/29/magazine/29kink.t.html?pagewanted=all&_r=0
Newman က, ME: ကွန်ရက်သင်္ချာ။ နယူး Palgrave Encycl ။ Econ ။ (2008) ။ https://doi.org/10.1057/978-1-349-95121-5_2565-1 Google Scholar
Olivier, S ။ :”“ လူမှုကွန်ယက်ဆန်းစစ်ခြင်း။ ” ဗဟုသုတဖြေရှင်းနည်းများ။ Springer, စင်ကာပူ, စစ။ 39-43 (2017)Google Scholar
Opsahl, T ။ : အလေးချိန်ကွန်ရက်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် (ပါရဂူဘွဲ့စာတမ်း, Queen Mary, London University) (2009) ။ ထံမှမတ်လ 27, 2019 ရယူရန်https://toreopsahl.files.wordpress.com/2009/05/thesis_print-version_withoutappc.pdf
Opsahl, တီ, Agneessens, အက်ဖ်, Skvoretz, ချိန်ကွန်ရက်မှာ J ကို .: Node ကအဓိကဗဟို: General ဒီဂရီနှင့်အတိုဆုံးလမ်းကြောင်း။ Soc ။ Netw ။ 32(3), 245-251 (2010) ။ https://doi.org/10.1016/j.socnet.2010.03.006 CrossRefGoogle Scholar
Paranyushkin, စာသားရဲ့ polysingularity သုံးပြီးကွန်ယက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏: D .: Visual ။ ရှေ့ပြေးပုံစံလက်တ။ 2(3), 256-278 ။ မှရယူရန်: https://noduslabs.com/research/visualization-text-polysingularity-network-analysis/ (2011)
အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်အိုးထိန်းသမား, WJ, Levine-Donnerstein, D ကို .: Rethinking တရားဝင်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ဂျေ Apple က။ Community ။ res ။ 27(3), 258-284 (1999) ။ https://doi.org/10.1080/00909889909365539 CrossRefGoogle Scholar
Ropelato, ဂျေ .: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစာရင်းဇယား (2006) ။ ရယူရန်မတ်လ 27, 2019 ထံမှ http://www.ministryoftruth.me.uk/wp-content/uploads/2014/03/IFR2013.pdf
Similarweb.Xvideos.com ယာဉ်အသွားအလာစာရင်းအင်းများ။ (2019) ။ https://www.similarweb.com/website/xvideos.com။ Access 27 မတ်လ 2019
Štulhofer, အေ, Buško, V. , Landripet, ငါသည်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး, နှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု .: ။ Arch ။ လိင်။ ပြုမူနေ။ 39(1), 168-178 (2010) ။ https://doi.org/10.1007/s10508-008-9387-0 CrossRefGoogle Scholar
နေရောင်, C တို့, Bridges, အေ, Wosnitzer, R. , Scharrer, အီး, Liberman, R ကိုလူကြိုက်များညစ်ညမ်းအတွက်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုဒါရိုက်တာတစ်ဦးကနှိုင်းယှဉ် .:: အမျိုးသမီးများသည်ပဲ့မှာအခါဘာဖြစ်သွားမလဲ Psychol ။ အမြိုးသမီးမြားဆိုးကျိုး 32(3), 312-325 (2008) ။ https://doi.org/10.1111/j.1471-6402.2008.00439.x CrossRefGoogle Scholar
Vannier, SA, ဟင်း, AB, O'Sullivan, LF: ကျောင်းသူလေးများနှင့်ဘောလုံး moms: အခမဲ့ "ဆယ်ကျော်သက်" နှင့် "MILF" အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ဂျေလိင် Res ။ 51(3), 253-264 (2014) ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2013.829795 CrossRefGoogle Scholar
Vladeanu, အမ်, Lewis က, အမ်, အဲလစ်, H ကို .: မျက်နှာများအတွက် priming Association: semantic ဆက်နွယ်မှုသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသော Co-ဖြစ်ပျက်မှု? မှတ်ဉာဏ်သိမြင်မှု။ 34(5), 1091-1101 (2006) ။ https://doi.org/10.3758/bf03193255 CrossRefGoogle Scholar
Wilson က, BJ, Kunkel, ဃ, Linz, ဃ, Potter, ဂျေ, Donnerstein, အီး, စမစ်, SL, ခြုံငုံရုပ်မြင်သံကြားပရိုဂရမ်းမင်းအတွက် et al .: အကြမ်းဖက်မှု: ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်, Santa Barbara လေ့လာမှု။ ခုနှစ်တွင်: Seawall, အမ် (ed ။ ) အမျိုးသားရုပ်မြင်သံကြားအကြမ်းဖက်မှုများလေ့လာမှု, vol ။ 2, စစ။ 3-204 ။ sage ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း, တစ်ထောင်သပိတ် (1998)Google Scholar
Wright, PJ: ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်များအတွက်အရေးဆိုမှုအကဲဖြတ်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ် Mass မီဒီယာဆိုးကျိုးများ။ အမ်း။ int ။ Community ။ Assoc ။ 35(1), 343-385 (2011) ။ https://doi.org/10.1080/23808985.2011.11679121 CrossRefGoogle Scholar
Wright, PJ: အမေရိကန်အထီးနှင့်အညစ်ညမ်း, 1973-2010: စားသုံးမှု, ခန့်မှန်း, ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဂျေလိင် Res ။ 50(1), 60-71 (2013) ။ https://doi.org/10.1080/00224499.2011.628132 CrossRefGoogle Scholar
ယန်, N. , Linz, D ကို .: Movie, ratings နှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဗီဒီယိုများ၏အကြောင်းအရာ: လိင်အကြမ်းဖက်မှုအချိုးအစား။ ဂျေ Community ။ 40, 28-42 (1990) ။ https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1990.tb02260.x CrossRefGoogle Scholar
zhou, Y. , ပေါလု B ကို .: Lotus အပွင့်သို့မဟုတ်နဂါးအမျိုးသမီးတစ်ယောက်: "အာရှအမျိုးသမီးတွေအတွက်" အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းတဲ့အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ လိင်။ အစွန်းရောက်။ 20(4), 1083-1100 (2016) ။ https://doi.org/10.1007/s12119-016-9375-9 CrossRefGoogle Scholar